आखिर कसले हान्दै छ बम ? – Saurahaonline.com
आखिर कसले हान्दै छ बम ?
काठमाडौं, १४ मंसिर । गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित कांग्रेसको चुनावी सभालाई लक्ष्य गर्दै गत मंगलबार दाङमा गराइएको बम विस्फोटमा परी घाइते भएका म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको बुधबार बिहान उपचारक्रममा मृत्यु भयो । देउवाले सम्बोधन गर्दैगर्दा नजिकै भएको विस्फोटमा चौधरीसहित नौ प्रहरी घाइते भएका थिए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरअन्तर्गत कार्यरत चौधरीको उपचारक्रममा नेपालगन्जस्थित कोहलपुर मेडिकल कलेजमा निधन भएको हो । चुनावी गतिवधि सुरु भएसँगै तीव्र बनेको विस्फोटमा पहिलोपटक मानवीय क्षति भएपछि आमजनताले बम विस्फोट गराउनेको खोजी गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । ‘के उद्देश्यले र कसले गराएको थियो विस्फोट रु मुलुकभर कसले र किन बम पड्काइरहेको छ रु ु आमजनता यसको जवाफ खोजिरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले विस्फोटमा परी घाइते भएका चौधरीको उपचारक्रममा मृत्यु भएको पुष्टि गरे पनि कसले विस्फोट गराएको थियो भन्ने जवाफ दिन सकेको छैन । विस्फोट गराउँदै हिँड्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता हुन् वा उच्छृंखल समूह वा सर्वसाधारणले भन्ने गरेजस्तो ‘अदृश्य विदेशी शक्तिु या अरू कुनै समूह रु यसबारे सरकारसँग प्रशस्त सूचना भएको र सुरक्षा निकायले पहिचान पनि गरिसकेको विभिन्न स्रोतले पुष्टि गरेका छन् । तर, सरकारले आधिकारिक रूपमा जानकारी नदिँदा सर्वसाधारणमा त्रास बढ्दो छ । ‘कसले विस्फोट गराउँदै छ भन्नेबारे पछि भन्छौुं, गृहप्रवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीले भने ।
चौधरीको मृत्युपछि परम्परागत शैलीमा दिइने १०र१५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति नै जीवनको मूल्य हो या विस्फोट गराउनेलाई कारबाही गरेर सरकारले उनको परिवारलाई न्याय दिन्छ रु अर्थात् क्षतिपूर्तिका रूपमा दिने त्यही १०र१५ लाख रुपैयाँलाई न्यायमा रूपान्तरण गरेर पन्छिन खोज्दै त छैन सरकार रु सायद जनता पनि सरकारबाट मुुलुकभर भएका विस्फोटका घटना र चौधरीको मृत्यु प्रकरणको उचित जवाफ खोजिरहेका छन् । के सरकारले सही जवाफ दिन सक्ला रु प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री नतोकेर त्यसको डाडुपन्यु पनि आफैँले लिएका छन् । सबै घटनाको जवाफ देउवाको काँधमा छ । आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ।